Hielscher - Sakha Ultrasonics! - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukuze ikunikeze ngekhwalithi engcono kakhulu nensizakalo yenqubo yakho, thina ku-Hielscher Ultrasonics senza uhla lwemikhiqizo yethu ngokwethu. Kusukela emcabangweni, ukuthuthukiswa kanye nemidwebo ye-CAD ekwenzeni imishini, ukuhlangana nokuhlolwa, sithatha ukwaneliseka okukhulu futhi sinaso imininingwane mayelana nekhwalithi ephelele. Njengoba singumkhiqizi we-ultrasonics singakunika okunye okukhethwa kukho kanye nokwenza ngezifiso ukuze uthole imishini ye-ultrasonic oyidingayo iphrojekthi yakho.
Thintana nathi namuhla ukuze uthole ukubonisana mahhala nokucaphuna
Uma usinikeza izidingo zakho zokucubungula (ivolumu, umgomo) sizojabula ukukutusa ukulungiswa okufanele kakhulu ngokusekelwe kobuchwepheshe bethu obubanzi ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic. Ukuphumelela kwethu akuklanyelwe kumaqhinga okuthengisa okunzima futhi izingcingo eziningi zokulandela. Siyishiya kuwe ukuze uxhumane nathi uma ufisa ukuqhubeka noma ukuxoxa ngokuqhubekayo.
Sithenga Ikhwalithi – Ngakho Uyakwenza
Sithuthukisa kakhulu izinto zethu nezinto zethu. Njengoba singabakhiqizi futhi, siyazi ukuthi imfanelo ayifinyeki. Sakhetha abahlinzeki bethu ngokusezingeni eliphezulu kanye nekhono labo futhi bakhe ubuhlobo besikhathi eside nabo.
Sebenzisa isikhungo sethu sobuchwepheshe
Ukuze uhlole i-sonication ku-beaker noma uqhuba amakhilogremu amaningana / imininingwana emine, sinesikhungo sethu sobuchwepheshe kanye nomshayeli wezitshalo zokushayela ohlonyelwe ama-homogenizers aphethwe ngesandla kanye nama-high ultrasonicators aphezulu ngamaseli okugeleza. Ochwepheshe bethu bezinqubo bazosebenza nawe ukuthola imigomo yenqubo engcono kakhulu yokwenza inqubo yakho isebenze. Funda kabanzi…
Sinikeza ngezinsizakalo zokuqeqesha abacwaningi, ochwepheshe, abaqhubi kanye nabasebenzi bokulondoloza. Lokhu kungenziwa esikhungweni sethu sobuchwepheshe noma endaweni yakho.
Ukuqinisekisa ukufakwa okubushelelezi nokuqala kwesistimu ye-sonication kusayithi lakho, sinezichwepheshe zethu zokufaka ezizinikezele. Kusukela ku-wiring ohlelweni lwe-ultrasonic emandleni akho ukukusiza ekulawuleni kwe-PLC – siyifinyelela.
I-Ultrasonic Toll Processing
Singabantu ochwepheshe ema-ultrasonics. Singakuthatha imininingwane yakho endaweni yethu yokushayela isitshalo eJalimane. Sinegunya le-ultrasonic, ukugeleza kwamaseli amakhemikhali, amaphampu, ukushisa-ukuhwebelana kanye nemishini yokuhlaziya yokulawula izinga. Buza ukuthi uthole isaphulelo.